मेरो दु:ख र चुनौतीहरूलाई सोखको नाम दिन सक्नु हुन्न — News of The World
आज : २०७५ साउन २९ गते
नेपालमा दुई हजार ३०० जातका धान !
निर्वाचन क्षेत्र विकास’को रकम आफूखुशी चलाउन नपाइने
नक्कली बम राख्ने बन्दकर्ता पक्राउ
Government is serious to guarantee social security, says Labour Minister
खस्कियो भारतीय रुपैयाँ
भारतका ३० र पाकिस्तानका ७ कैदी रिहा
संसार न्यूज संवाददाताबैशाख २८, २०७५
नेपालका एक मात्र अन्तराष्ट्रीय नेपाली मोटर साइकिल रेसर बिक्रम थापा ले जापानको टोकियो सहरमा १९८१ देखि आयोजना गर्दै आएको TK Rental Bike Series Race २०१८ को राउण्ड १ को फ़ाइनल प्रतियोगितामा जापानी भुमिमा सम्पुर्ण जापानी रेसरहरूलाइ पछि पार्दै यो बर्ष २०१८ को राउण्ड १ मा प्रथम भइ स्वर्ण पदक प्राप्त गरि नेपाललाइ स्वर्णिम अक्षरमा संन्सार भरि चिनाउन सफल भएका छन । भने दोस्रो चरणमा तेस्रो स्थानमा आफूलाई पिमित गरेका छन् । सन्सारमै अति महगो र खतरनाक मानिने यो मोटर साइकिल रेसमाआफ्नै साधन र स्रोत बाट बिगत ४ बर्ष देखि लगातार नेपाली झण्डा फहराउदै संन्सार भरि नेपालको नाम उज्जवल गर्दै हिडेका नेपाली रेसर बिक्रम थापाले आफनो मेहनत र लगन सिलताका कारण यो पटक जापानीहरूलाइ उनिहरूकै भुमिमा सम्पुर्ण जापानी रेसरहरूलाइ पछि पार्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका हुन् । यसअघि पनि उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियिोगिताहरुमा भाग लिएका छन् ।
रेसर बिक्रम थापा आफ्नै साधन र स्रोत ले यो स्थान सम्म पुग्न सफल भएका हुन् । व्यक्तिगत खर्चमा चुनौतीपूर्ण खेलबाट देशको सान राख्ने काम गरेको भएपनि देशले यस्ता प्रतिभालाई चिन्न नसकेको गुनासो गर्छन् विक्रम थापाका बाबु कपिलदेव थापा । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य समेत रहेका थापा प्रश्न गर्छन्“खेलाडी राष्ट्रका गहना र सम्पतिहुन ,यिनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाइ संन्सार भरिनै चिनाउने काम गरेका हुन्छन, तर राष्ट्रले यी खेलाडी लाइ चिन्ने र देशमा यो खेल सम्बन्धि सहयोगको पहल सुरू गर्ने कहिले होला ? । छोराको चाहना पुरा गर्न आफैले खर्च जुटाइरहेका छन् । यदि देशले सहयोग गर्न सके आगामी दिन छोराले मोटरसाइकल रेसरका रुपमा देशको नाम अझ उँचो बनाउन सक्ने भनाई व्यक्त गर्दछन् थापा । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मोटरसाइकल रेसर विक्रम थापासँग गरिएको कुराकानी :
पहिलो चरणमा पहिलो र दोस्रो चरणमा तेस्रो बन्नु भएको छ, कस्तो लागेको छ ?
निकै ख़ुशी छु । मेहनत गरेको फल आइरहेको लगिरहेको छ । तर लक्ष्य सम्म पुग्नका लागि अझै धेरै मेहने गर्नु पर्नेछ ।
यो रेसको प्रतियोगिता कति चरणसम्मको हुन्छ ?
यो १ बर्षमा ६ राउण्ड को हुन्छ जसमा यो वर्ष २ राउण्ड सकिसकेको छ ।
मोटरसाइकल कहिलेबाट चलाउन थाल्नु भयो ?
सानै देखी क्लास ४ मा पढ्दा नै पहिलो पटक मोटरसाइलक चलाएको थिएँ ।
यति चुनौतीपूर्ण काम किन रोज्नु भयो ?
सानैदेखी मोटरसाइकलमा रुचि थियो । एउटा रियल रेयस ट्रैकमा मोटरसाइकलको सबै स्थिति बुझेर आफ़नो सिप प्रयोग गर्न पाउँदा निकै ख़ुशी लाग्छ, त्यसैले यो चुनौती रोज़ेको हुँ।
रेसर बन्छु भन्ने प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भयो ?
सानैदेखी मलाई जे मा प्यासन थियो मैले त्याहि प्रोफ़ेसन रोज़े । मेरो बाल्यकाल नै मेरो प्रेरणा हो, भनुम।
तपाईले चलाउने बाइक कति रकमको हुन्छ ?
मैले रेएसमाँ चलाउने मोटरसाइकल रेसिंग कम्पनीहरूले मात्रै ख़रीद गर्न मिल्छ। एकदमै महँगो हुन्छ ।
रेसर बन्न परिवारबाट स्वीकृति पाउन कत्तिको सहज भयो ?
गाह्रो त भयो तर मलाई रोक्नु चाही हुन्न ।
परिवारबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?
मेरो सबै परिवारको सहयोगबाटै यहाँ सम्म आएको हुँ ।
रेसर बन्न कत्तिको गाह्रो छ ?
प्रोफ़ेशनल रेसिंग सोचेको भन्दा पनि एक्दमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ तर मेहनत र आत्मबल बलियो बनायो भने जस्तो सुकै चुनौती पनि अँगाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई ।
मेहनत र धैर्यता कत्तिको आवश्यक छ रेसर बन्न कि मुड बनाए पुग्छ ?
मूड भएर रेसर हूनी भए मैले यति संघर्ष गर्नु पर्दैनथ्यो । रेसरका लागी चाहिने दिमाग़, शरीर र भावना सबैको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्दछ । केवल मूड पर्याप्त हुँदैन ।
रेसर बन्ने क्रममा यहाँको कुनै दुखद् क्षण छ ?
प्रोफ़ेशनल रेसर बन्ने क्रममा धेरै पटक दुःख भोग्नु पर्यो । तर शारीरिक रुपमा मैले भोगेको दुःख भन्दा पनि आफ़नो देशबाट अपेक्षा गरेको सहारा र सपोर्ट नपाउँदा बढी दुःख लाग्छ।
रेसर सोख की यसैलाई पेशा बनाउनु हुन्छ ?
मेरो रेसिंग यात्रा बारे रिसर्च गर्नुभएको छ भने मेरो दुख र चुनौतीहरूलाई सोखको नाम दिन सकनु हुन्न।
आउँदा दिनमा यहाँको योजना के छ ?
मलाई अझै एक्स्पर्ट लेवल रेसहरूको प्रस्ताब आएको छ । ती प्रतियोगिताहरुमा प्रथम भएर देशको इज्जत राख्ने चाहना छ । त्यस्का लागि देशको सपोर्टको आवश्यकता छ ।
रेसर बन्न खोज्ने र रेसर बन्न डराइरहेकाहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
रेसिंग फ़ील्ड्मा सबै भन्दा पहिलो चरण नै डरलाई कंट्रोल गर्नु हो। बर्तमानमा नेपालमा प्रोफ़ेशनल रेसिंगको बैक्ग्राउंड नै नभएको कारण गाह्रो छ तर आउट अव द बक्स हेर्नु ज़रूरी छ। आँट गर्नुपर्यो। आफ्नो बजेट र क्षमता हेरेर उचित रेस ट्रैक र ट्रेनिंग हुने ठाउँमा ट्रेन गरे धेरै सिकिन्छ।
थप के भन्न चाहनुहुन्छ ?
थुप्रै प्रतिस्पर्धाबाट धेरै कुराको सिकाइको अनुभव मैले लिएको छु । मैले व्यक्तिगत खर्चमै अहिलेसम्म खेलेँ । अब खेललाई थप व्यवसायिक बनाउन क्षमता बढाउन सक्ने बाटोहरु पहिल्याएको छु । तर यो खेल महँगो खर्चको भएकाले लगानीसमेत त्यहि स्तरमा चाहिन्छ, जसका लागि स्पोन्सरहरुसमेत आवश्यक रहेको अनुभव गरेको छु ।